007 Jame Bond ရုပ်ရှင်များထဲမှ ဈေးကောင်းရတဲ့ ကား (၁၀) စီး | Myanmar Automobile Directory - Automotive Parts & Accessories Guide - Myanmar Automobile and Equipment Directory
007 Jame Bond ရုပ်ရှင်များထဲမှ ဈေးကောင်းရတဲ့ ကား (၁၀) စီး
007 Jame Bond ရုပ်ရှင်များထဲမှာ သုံးထားတဲ့ ကားရဲ့ ဈေးနှုန်းက ရုပ်ရှင်ထဲ မပါခင်တုန်းကထက် ဈေးဘယ်လောက် ပိုရသလဲ။
ဈေး အဆ ၅,၀၀၀ မြှောက်တက်သွားတဲ့ကား ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
'Wet Nellie' လို့ ချစ်စနိုးအမည်ပေးခံရတဲ့ ကားက 1977 Lotus Esprit S1 မော်ဒယ် ကားဖြစ်ပြီး 'The Spy Who Loves Me' ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီ'Wet Nellie' ကို လေလံပစ်တော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သန်း နီးပါး ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့မှာ တည်ရှိတဲ့ ကားပြတိုက်ဖြစ်တဲ့ Petersen Automotive Museum မှာ “Bond in Motion” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဂျိန်းဘွန်း ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲမှာ သုံးစွဲခဲ့တဲ့ ကားတွေကို ပြသတဲ့ ပြပွဲ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သတ္တမမြောက် ဂျိန်းဘွန်း ရုပ်ရှင် No Time To Die ကို ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ စတင်ပြသနေတဲ့ကာလ ဖြစ်နေတယ်။
ဂျိန်းဘွန်းရုပ်ရှင်ထဲ ပါသွားလို့ ဈေးမြှောက်သွားတဲ့ ကား ၁၀ စီးကို ပြပွဲကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ Hagerty က စုစည်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။
ကားဈေးနှုန်းတွေကိုတော့ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်တုန်းက ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ငွေလဲနှုန်းအသီးသီးဖြင့် တွက်ချက်ထားတယ်လို့ သူက အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အနီရောင် Ford Mustang Mach 1 ကို ၁၉၇၁ ခုနှစ်မှာ ရိုက်ကူးပြသခဲ့တဲ့ Diamonds are Forever ရဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းမှာ သုံးစွဲခဲ့တယ်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ ကားကို ပြန်ရောင်းတဲ့အခါ ကားစုဆောင်းသူတွေအကြား စိတ်ဝင်တစား သိပ်မရှိလှဘူး။ လေလံပစ်တာ $23,000 အများဆုံး ပေးတယ်။ ဈေးပိုရတဲ့ ရာခိုင်နှုန်း ၃၇.၅% ဖြစ်ပါတယ်။
No Time To Die 1991
ဒီမားစီးဒီးကားက နည်းနည်းထူးဆန်းတယ်လို့ ဆိုတယ်။
No Time to Die မှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ မှတ်တမ်းဝင်ပေမဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားလုံး အစမှ အဆုံး ဇာတ်ဝင်ခန်း တစ်ခန်းမှာမှ မတွေ့ရဘူး။ နမူနာပြသတဲ့ ကားတိုမှာလည်း မပါဝင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ No Time to Die မှာတယ်လို့ မှတ်တမ်းဝင်နေပြီး ရောင်ဈေးက မူရင်းထက် ၃၈% ပိုများခဲ့တယ်လို့ Hagerty က ပြောပြထားပါတယ်။
Never Say Never Again 1937
Warner Brothers ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိရေးလုပ်ငန်းရဲ့ ပေါက်သွားတဲ့ ဂျိန်းဘွန်းရုပ်ရှင် Never Say Never Again မှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှာ ရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ကား ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ ကားကို လက်ထဲ ရရှိထားသူက လေလံပစ်တယ်။ $254,250 ရရှိခဲ့တယ်။
၆ နှစ်အကြာ ၂၀၁၀ မှာ ကားကို ပြန်ရောင်းဖို့ လေလံပစ်တာ $298,810 ရရှိခဲ့တယ်။
ဘွန်းရုပ်ရှင်အပြင် Magnum, P.I. တို့မှာလည်း ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ Pebble Beach မှာလည်း ပါဝင်ခဲ့တယ်။
ကားကို ပြုပြင်မွမ်းမံတာ $450,000 ကျော် ကုန်ခဲ့ပါတယ်။
ဂျိန်းစဘွန်းက တစ်ကြိမ်ပဲ မင်္ဂလာဆောင်ဖူးတယ်။ အဲဒီ မင်္ဂလာဆောင်မှာ စီးတဲ့ကားကို ပြန်ရောင်းတာ ဈေး ၂ဆ နီးပါး ရခဲ့ပါတယ်။
၁၉၆၉ ခုနှစ်မှာ ရုံတင်တဲ့ On Her Majesty’s Secret Service ရုပ်ရှင်ထဲက မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းမှာ ပါတဲ့ မင်္ဂလာကားက ဆလင်ဒါ ၆ လုံး Aston Martin DBS ဖြစ်ပါတယ်။ ဩစတေးလျနိုင်ငံသို့ တင်ပို့ခဲ့ပြီး ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှာ လက်ရှိ အုံနာ Sigi Zidziunas က ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ သူက ပြောတယ်။ “သတင်းစာထဲ ကြော်ငြာပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ သုံးခဲ့တဲ့ကားလို့ ဆိုတယ်။ ကျွန်တော် မယုံခဲ့ဘူး။ တစ်ပတ်ရစ်ကား ရောင်းတဲ့သူတွေက ကားရောင်းကောင်းအောင် ဈေးကောင်းရအောင် ပြောဆိုတာတွေ ရှိတယ် မဟုတ်လား”
ကြော်ငြာမှာ ဩဇီဒေါ်လာ 14,950 လို့ ဈေးနှုန်းဖော်ပြထားတယ်။ Sigi Zidziunas က ဈေးဆစ်တယ်။ တန်းတူ အခြေအနေကောင်းတဲ့ တစ်ပတ်ရစ်ကား ပုံမှန်ကားတွေက $12,108 နဲ့ ရောင်းနေတယ်။ ဒီတော့ သူက $14,200 နဲ့ ဈေးတည့်ပြီး ဝယ်ဖြစ်သွားတယ်။
အခုတင်ပြမယ့် 2008 Aston Martin DBS က Quantum of Solace ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ကား ၇ စီး သုံးစွဲခဲ့တဲ့အနက် တစ်စီး ဖြစ်ပါတယ်။
ကားစုဆောင်းသူတွေအတွက် ပြန်ရောင်းခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ လေလံဌာန Christie’s က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လမ်းတွေ မောင်းလို့ ရအောင် ဥပဒေအရ လိုအပ်တာတွေ ပြင်ဆင်မွမ်းမံဖို့ လိုအပ်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်အားလုံး ဝယ်ယူသူမှာသာ တာဝန်ရှိကြောင်းလည်း အသိပေးပြီး လေလံပစ်ခဲ့ပါတယ်။ လေလံမပစ်ခင်မှာ $204,000 တော့ အနည်းဆုံး ရလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့ကြတယ်။
လေလံပစ်တော့ $387,930 ရရှိခဲ့ပါတယ်။ မူရင်းဈေးထက် ၂၄၅ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများပါတယ်။
၁၉၆၉ ခုနှစ် ဂျိန်းဘွန်း ရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ On Her Majesty’s Secret Service မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ Cougar လေးစီးအနက် တစ်စီး ဖြစ်ပါတယ်။ Aston Martin DBS-6 နဲ့အတူ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာလမှာ ရောင်းဖို့ လုပ်တော့ $202,200 ရမယ်လို့ ခန့်မှန်းကြတယ်။ လေလံမှာ $490,867 ရရှိခဲ့ပါတယ်။ မူရင်းဈေးထက် ၅၉၉ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့မှာ နာမည်အကျော်ကြားဆုံးကားလို့ သတ်မှတ်ခံရတဲ့ ကားတစ်စီး ဖြစ်ပါတယ်။Thunderball နဲ့ Goldfinger တို့မှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်။
၂၀၁၉ မှာ လေလံပစ်တယ်။ $6,437,990 ရရှိခဲ့ပါတယ်။ မူရင်းဈေးထက် ၇၆၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူ Aston Martin DB5 ကားကို Golden Eye မှာ သုံးစွဲခဲ့ပြီး အဲဒီကားကို လေလံပစ်တာ $2,646,687 ပဲ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
Land Drover Defender 110
ဂျိန်းဘွန်း ရုပ်ရှင်ကား Spectre မှာ ပါတဲ့ Land Rover ကားတွေကို အထူးထုတ် Bond SVX Defender 110s double cab ဆိုပြီး လေလံတင်လေ့ ရှိတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ တစ်စီး လေလံပစ်တယ်။ $310,340 ရတယ်။ လပိုင်းအကြာမှာ နောက်တစ်စီး ထပ်ပြီး လေလံပစ်တယ်။ $480,340 ရတယ်။ ၂၀၁၆ မှာ မူရင်းမူလ Defender ထုတ်လုပ်မှုကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်တော့ Defender အဟောင်းတွေ လိုက်ဝယ်ပြီး စုဆောင်းနေကြချိန်ဆိုတော့ လေလံကို စိတ်ဝင်တစား ရှိခဲ့ကြတယ်။ အဲဒါကြောင့် မူရင်းဈေးထက် အဆ ၁,၀၀၀ နီးပါး ရလိုက်တယ်။
ဝယ်လိုအား အရမ်းကောင်းနေလို့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ နှစ် (၇၀) ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခု သတ်မှတ်ပြီး ပြန်ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။
ရော်ဂျာမိုး ပါဝင်တဲ့ The Man with the Golden Gun ကို ၁၉၇၄ ခုနှစ်မှာ ရုံတင်ပြသတယ်။ AMC Hornet ကို သုံးစွဲထားတယ်။
ရုပ်ရှင်အတွက် ကားကို သေသေချာချာ မွမ်းမံပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ လေလံပစ်တာ $110,000 ရရှိခဲ့ပါတယ်။ မူရင်းဈေးထက် ၁၆ ဆ ပိုရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Lotus Esprit S1 ‘Wet Nellie’
ဂျိန်းစဘွန်း စီးတော်ယာဉ်တွေထဲမှာ ဈေးအများဆုံး ကား ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ RM Sotheby’s လေလံဌာနမှာ လေလံပစ်တာ $997,000 ရရှိခဲ့တယ်။ မူရင်းဈေးတက် ၄,၉၀၈ % ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
'Wet Nellie' လို့ ချစ်စနိုးအမည်ပေးခံရတဲ့ ကားက 1977 Lotus Esprit S1 မော်ဒယ် ကားဖြစ်ပြီး 'The Spy Who Loves Me' ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ မြေပေါ်မှာ မောင်းတာအပြင် ရေအောက်မှာလည်း မောင်းလို့ ရအောင် လုပ်ပေးထားတယ်။
ဇာတ်ကားထဲမှာ ပါတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေအတွက် အရောင်အသွေးတူ Esprits တွေကို သုံးစွဲခဲ့တယ်။ နှစ်စီးကို ကိုယ်ထည်ချည်းသက်သက် ယူပြီး ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေမှာ ကားကနေ ရေငုပ်ကားအဖြစ် ပြောင်းလဲပုံ အဆင့်ဆင့် ပြသဖို့ သုံးစွဲခဲ့တယ်။ အဲဒီ နှစ်စီးမှာ ဘီးတွေ ပါတယ်။ ရေထဲ ဆင်းတဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းနဲ့ ရေထဲကနေ ကမ်းစပ်သောင်ပြင်ပေါ် ပြန်တက်လာတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေမှာ သုံးစွဲတယ်။ အင်ဂျင်တို့ ဂီယာအုံတို့ မပါဘူး. ကြိုးနဲ့ ရေထဲဆွဲချ၊ ကြိုးနဲ့ ရေထဲက ဆွဲတင်ပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်။
ရေထဲမောင်းတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းမှာ ရေငုပ်သင်္ဘောအဖြစ် သုံးဖို့ တစ်စီး လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီကားကလည်း ကိုယ်ထည်ကိုပဲ ယူပြီး ပြုပြင်မွမ်းမံပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကားမှာ ဘီးလုံးဝ မပါဘူး။ အထဲမှာ မော်တာလေးလုံးတပ်ပြီး ပန်ကာတွေ လှည့်ပေးတယ်။ ရှေ့ကိုပဲ သွားလို့ရတယ်။ နောက်ပြန်ဆုတ်လို့ မရဘူး။ လူနှစ်ယောက် ထိန်းကျောင်းမောင်းနှင်ပေးရတယ်။
ကားနဲ့ ပြေးတမ်းလိုက်တမ်း မောင်းတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းအတွက် ကားကို Lotus ကားကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ စီးနေတဲ့ကားကို ငှားရမ်း သုံးစွဲခဲ့တယ်။
ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးပြီးစီးတဲ့အခါ ရေငုပ်ကားကို နယ်လှည့်ပြီး ပြသခဲ့တယ်။ ပြသတဲ့ အစီအစဉ် ပြီးစီးတဲ့အခါ ကွန်တိန်နာထဲ ထည့်ပြီး နယူးယောက်ဆိပ်ကမ်းကို ပေးပို့လိုက်တယ်။ ၁၀ စာ ထားဖို့ စီစဉ်ထားခဲ့တယ်။ နှစ်ပြည့်ချိန်မှာ ကွန်တိန်နာကို လာမရွေးဘူး။ ဒီတော့ နှစ်စေ့ လာမရွေး ကွန်တိန်နာတွေ လေလံပစ်တဲ့ စာရင်းထဲ ထည့်လိုက်တယ်။ အထဲမှာ ဘာပါသလဲ အသိမပေးဘဲ လေလံပစ်တဲ့ စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ လေလံအောင်တဲ့သူက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀ အောက်ဖြင့် ရသွားတယ်။ ကိုယ်ထည်ကို ဆေးပြန်မှုတ်ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ဂျိန်းဘွန်းစီးခဲ့တဲ့ကားအနေဖြင့် လေလံပစ်တယ်။ လျှပ်စစ်ကား Tesla ထုတ်လုပ်သူ Elon Musk က လေလံဆွဲတယ်။ သူက Tesla Motors မှာသုံးတဲ့ လျှပ်စစ်သုံး မောင်းနှင်စနစ် တပ်ဆင်ပြီး တကယ်သုံးလို့ရတဲ့ ရေငုပ်ကားဖြစ်အောင် ပြုပြင်ဖို့ စိတ်ကူးရှိတယ်လို့ သူက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
How To Read 795 times